Medical indasitiri - Digital Manufacturing Co., Ltd.
Kazhinji, murwere mumwe nomumwe ari kurapwa mhosva zvikuru, uye customized kugadzirwa muoti anogona ienzane. Muzviitiko izvi. Kukura 3D zvokudhinda michina ari kusandudzirwa zvokurapa mafomu, uye zvinoita rubatsiro guru reciprocally, izvi zvinosanganisira oparesheni AIDS, prosthetics, anodyara, dentistry, dzidziso zvokurapa, zvokurapa zviridzwa, uye zvichingodaro.
3D Kudhinda anoita akavhiyiwa nyore, nokuti vanachiremba kuti oparesheni plan, kuvhiyiwa kumboona, kutungamirira bhodhi uye hunakidze chiremba-kushivirira kukurukurirana.
3D Kudhinda akaita zvokurapa zviridzwa zhinji, dzakadai prosthetics, orthotics uye chakagadzirwa nenzeve nyore kuti uye inokwanisika zvevoruzhinji.
Chekutanga, CT, MRI nezvimwewo zvinoshandiswa atarise uye kuunganidza 3D Data varwere. Zvadaro, CT Data vakanga reconstructed kupinda 3D Data kubudikidza combiyta (Arigin 3D). Pakupedzisira, 3D Data zvakaitwa mu hwakasimba yokutevedzera nokuda 3D purinda. Uye tinogona kushandisa 3d mienzaniso kubatsira mashandiro.
Medical Chikumbiro --- Preoperative kutaurirana
Nokuti ane ngozi uye mashandiro akaoma, preoperative kuronga kunokosha chaizvo. Setsika, varwere 'mashoko vave kuwanikwa kuburikidza kuri mano akadai CT uye MRI, izvo vanoshumira sehwaro vanachiremba' preoperative kuronga. Zvisinei, vakawana rubatsiro mifananidzo ndeiya yakaita ndiro zvakaomera varwere kunzwisisa, kunyanya vamwe yakaoma maronda, izvo chete verenga navanachiremba ruzivo.
The 3D muenzaniso lesion zvinogona kudhindwa zvakananga nokuda 3D, aidhinda zvisingagone chete vanobatsira chiremba mune yakarurama kuvhiya kuronga uye kuvandudza mwero wokubudirira wokuvhiya, asiwo aivabatsira kuti kutaurirana pakati chiremba uye murwere pamusoro kuvhiya urongwa. Uyezve, kunyange pashure kurapwa kukundikana, 3D kudhinda kungaita traceable hwaro zvose vanachiremba uye varwere
For yakaoma kushandiswa, vanachiremba vanogona kukurukura uye kuronga akavhiyiwa maererano 3d muenzaniso kuwana zvakanakisisa oparesheni urongwa.
Kuvhiya mutungamiriri ndiro
Kuvhiya inotungamirira bhodhi iri webetsero kuvhiya chokushandisa zvakarurama kushandisa preoperative kuronga panguva oparesheni. Rave kushandiswa nezvezviitiko zvakawanda, zvakadai: yemajoini gwaro ndiro, musana richitungamirira ndiro, nemumuromo kudyara mutungamiriri ndiro, uye Positioning mutungamiriri bwendefa munyika mwaranzi panobva PARTICIPLE muchibereko mu bundu.
Kushandiswa 3D zvokudhinda preoperative design nhungamiro template kana osteotomy template anogona kukurumidza uye zvakarurama kuwana lesion nzvimbo, kuderedza iatrogenic kukuvara kunokonzerwa zvikanganiso, kuderedza kuvhiyiwa nguva, kupfupisa mishonga nguva varwere, izvo zvinokosha zvikuru dzevarwere mangwanani mabasa uye mangwanani kupora
Rehabilitation zvokurapa midziyo
Prosthetics, kunzwa zvinoyamura nezvimwe vapore dzokurapwa mano vane batch mangé duku, customized kudiwa, uye magadzirirwo yavo uyewo kuoma, chinyakare CNC machine nematurusi havabvumirwi ne kubudiswa angled nevamwe factors.3D zvokudhinda zvemichina haringorevi marongerwo uye chitarisiko, uye ane chiri nokukurumidza prototyping, riri kushanda magadzirirwe munhu zvichienderana zvigadzirwa. Naizvozvo, 3D rokudhinda zvemichina kwave zvishoma nezvishoma kureva kusango anobatsira vapore. Mukuwedzera, inodiwa rimwe customized vapore rubatsiro zvichabviswa yekudyidzana ipfupi.
Medical mafomu - orthodontics
Mumakore achangopfuura, software magadzirirwo-kwakavakirwa mazino restorations vava nevakawanda. Vazhinji mazino Makiriniki mumarabhoritari kana nyanzvi denture vagadziri vakasuma 3D kudhindwa michina, izvo vakauya kuchinja kukuru kune mazino indasitiri tichitarisa dzakakwirira nemazvo, pasi mutengo uye yakakwirira kunyatsoshanda. The chikuru mafomu ose 3D kudhindwa michina iri mazino indasitiri ndeinotevera:
1. Dental anoumba,
Vakawanda mazino kiriniki kana mumarabhoritari kushandisa 3D vaidhinda kuti yokutevedzera mazino dzevarwere. Dental anoumba zvinogona kushandiswa anoumba kubatsira kubudisa mazino korona, nezvimwewo, uyewo kuti vatevedzere, kuronga uye kufambisa kuvhiya kwacho pamwe nevarwere.
2. Dental kudyara,
Parizvino, digitaalinen muchibereko zvikuru uye vakawanda mumusika. Chikonzero ndechokuti muchibereko kwakarongwa-software zvikuru zvakarurama, uye zvakagadzirirwa kudyara mutungamiriri ndiro uye customized kudyara zvakawanda akakodzera yokuora kushandiswa.
Tichienzanisa chinyakare simbi waya orthodontics, 3D akadhinda asingaoneki orthodontics haisi chete asingaoneki uye akanaka, asi zvikuru akakodzera murwere zino mamiriro padanho rimwe nerimwe munguva orthodontic nguva. Chii zvakawanda, 3D akadhindwa orthodontics ane paanopfuura tsika nzira, iyo kazhinji kuvimba chiitiko chiremba wemazino.
4. Dental kudzorerwa. A simbi korona wakaiswa bhiriji inogona chakaitwa 3D kudhindwa michina, kana nebwe muenzaniso zino bhiriji vakakanda ne vakarasika-namo muitiro, kana kunyange zvakananga 3D yokudhindwa zino korona zvinogona kuwanika.
3DSL-36O Hi (tinova vhoriyamu 360 * 360 * 300 mm), mukuru kushanda, mukuru yakarurama!